China 1350KG, 1500KG ofdị Magnetik Formwork System ndị na-emepụta na ndị na - eweta ya | Meiko Igwe Ọdụdọ
1350KG ma ọ bụ 1500KG Magnetik Formwork System bụkwa ụdị ike ikike ọkọlọtọ maka prekịn plateform fixing, nke a na-atụ aro ya nke ukwuu iji maka idozi sidemould na ogwe osisi sandwich. Ọ nwere ike dabara nke ọma nchara nchara ụdị ma ọ bụ osisi plywood formwork, dị iche iche na nkwụnye ma ọ bụ ịpị bolts.
Mgbe emechara bọtịnụ, igbe ndị ahụ na-ejide tebụl ike. Ọ dị mfe ịkwanye efere igwe na efere osisi na mbọ. Enwere ike ịrụ ọrụ ya site na ịpị bọtịnụ ahụ n'aka ma ọ bụ ụkwụ. Iji gbanyụọ ha, a na-ewepụta ihe ndị dị nro site na nchara nchara (iji dọpụta bọtịnụ ahụ). N'ebe na-adịghị arụ ọrụ, a ga-ewepụ ihe ndọta magburu onwe ya n'ụzọ dị mfe na tebụl. Enwere ike iji ihe ndọta dị iche iche rụọ naanị ya ma ọ bụ jikọọ ya na adpator iji dozie usoro. Nọmalị 1350Kg vetikal ike igbe magnet bụ n'ụzọ zuru okè kwesịrị ekwesị maka 80-150mm ọkpụrụkpụ mgbidi panel mmepụta. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịmepụta ihe ndị ọzọ na-eme ka ihe ọ bụla nwee ike rụọ ọrụ, ọbụlagodi 2500KG, 3000KG ụdị dị ka ihe ị chọrọ.
N'ihi ahụmịhe bara ụba anyị nwere na ihe ndị ọzọ a na-eme, anyị, Meiko Magnetics, nwere ike ịhazi ma mepụta ihe niile magnetik maka usoro ihe nrụpụta ihe, n'agbanyeghị ihe ndọta igbe, tinye ihe ndọta, ihe ndọba ọkpọkọ, magnetik ezumike mbụ ma ọ bụ magnetik ndị ọzọ usoro na precast ngwa.
AMAOKWU bara uru nke Precast Shuttering Igwe Ọdụdọ:
1. Mbelata ihe mgbagwoju anya na oge nke ntinye nke formwork (ihe ruru 70%).
2. Universal iji maka uka mmepụta nke ihe na ngwaahịa, na mpempe ngwaahịa niile iche na otu ígwè table.
3. Na-ewepụ mkpa ọ dị maka ịgbado ọkụ, ịgbanye magnet adịghị emebi tebụl nchara.
4. Na-eme ka o kwe omume ịmepụta ngwaahịa radial. Formwork Shuttering Igwe Ọdụdọ maka Precast Osisi
5. A obere ego nke a set nke nju. The nkezi payback nke banyere 3 ọnwa.
6. Isi uru nke magnetik na-ekpuchi ya bụ na ọ dịghị mkpa ka ị nwee ọtụtụ ụdị dị iche iche maka ngwaahịa dị iche iche, ịkwesịrị inwe set nke magnet, ndị nkwụnye maka mbadamba elu dị iche na tebụl nchara. Precast Concrete Shuttering Igwe Ọdụdọ Box 900kg
.Dị L W H Rewghasa Ike NW
Nke gara aga: 900KG, 1Ton Box Igwe Ọdụdọ N'ihi Precast tilting Isiokwu akpụzi Fixing
Osote: 1800KG Shuttering Igwe Ọdụdọ na On / Off Button maka Prefabricated Building Formwork System
1.5Ton Ike bọtịnụ Igwe Ọdụdọ
1350KG Formwork Igwe Ọdụdọ
1350Kg Igwe Ọdụdọ
1350KG Precast Ihe Igwe Ọdụdọ
1350KG Shuttering Igwe Ọdụdọ
1500KG Igbe Igwe Ọdụdọ
1500KG Igwe Ọdụdọ
1500KG ụdị igbe ndọta
900KG, 1Ton Box Igwe Ọdụdọ N'ihi Precast Tilting Tab ...